Sri Lanka : Fihetsiketsehan’ny Mpiasa Ao Amin’ny Orinasa Afakaba Katunayake · Global Voices teny Malagasy
Sri Lanka : Fihetsiketsehan'ny Mpiasa Ao Amin'ny Orinasa Afakaba Katunayake
Nandika (fr) i Sakina Soobye
Voadika ny 22 Jona 2011 9:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Tanora mpiasa iray no namoy ny ainy ary mpiasa maherin’ny 200 sy polisy no naratra tamin’ny fifandonana nisy teo amin’ireo polisy sy mpanao fihetsiketsehana tao amin’ny toeram-piasana « afakaba » iray tao Sri Lanka, tamin’ny fiandohan’ity volana jona ity. Nanao fihetsiketseham-panoherana ny « rafitra momba ny fisotroan-dronono » natolotry ny governemanta sri lankey ireo mpiasan’ny orinasa « afakaba ».
Novokarin’ny orinasa afakaba Katunayake avokoa ny 30 %-n'ny famokaran-damba aondran’i Sri Lanka any ivelany, ny seha-panenoman-damba no sehatra iray amin'ny telo mampidi-bola vahiny ao Sri Lanka. Taorian’ny fifandonana, niteraka fatiantoka goavana teo amin’ny toe-karena ny fikatonan’io orinasa afakaba io nandritra ny roa andro.
Fihetsiketseham-panoherana ny fanafihana nataon'ny polisy tamin'ireo mpiasan’ny orinasa afakaba tsy mitondra fitaovam-piadiana teo anoloan’ny gara an-dalamby ao Kolombo- nokarakarain’ny fikambanan’ny sendikà tamin’ny (1 jona). Sary avy amin’ny Flickr, Vikalpasl. CC PAR – NC
Rasika Jayakody nanao fanamarihana tao amin’ny Groundviews:
“Ankoatra io famoizana ain’olona mampalahelo io, maherin’ny 200 ireo naratra noho ny fanafihana feno herisetra nataon’ny polisy tamin’ireo mpiasan’ny orinasa afakaba. Feno ireo mpanao fihetsiketsehana naratra ny hopitaly Ragama sy Negombo ny Alatsinainy hariva. Tsy azo isalasalana fa io no fifandonana hita fa mahery setra indrindra tamin’ireo fifandonana farany niseho. Maro ireo horonantsary nalaina izay mampiseho ny fanafihana lozabe sy feno habibiana nataon’ny polisy tamin’ny mpanao fihetsiketsehana tsy mitondra fitaovam-piadiana.”
Groundviews namoaka horonantsary sasantsany (avy amin’i Vikalpa) tamin’ny fihetsiketsehana ny alakamisy teo, horonantsary nalaina taorian’ny namonoan’ny polisy an’i Rochan Chanaka, tanora mpiasa ao amin’ny orinasa afakaba. Ity sombiny amin’izany:
Nametra-pialana ny lehiben’ny polisy sri lankey, Mahinda Balasuirya taorian’ny zava-nitranga, ary nosamborina ireo polisy anankiroa voarohirohy tamin’ny fifandonana. Efa misokatra ny fanadihadian’ny manampahefana mikasika ity raharaha ity.
Ny andro manaraka, sambany nidina andalam-be teo anoloan’ny fonenan’ny Filoha ireo moanina Boddhista an-jatony mba haneho ny tsy fanekeny ny famonoan’olona.
Bilaogera Serendipity nametra-panontaniana hoe:
Iza no nanome baiko hitifitra? Iza no nanome baiko hampiasa zava-maranitra? Nahoana no tsy nantsoina ny polisy misahana ny rotaka? Ary nahoana no tsy nampiasaina ny tafondron-drano?
Mahagaga koa fa tsy nisy mpampiasan’ny orinasa afa-kaba na iray aza namonjy ny fihetsiketsehana, izay mahatonga ahy mihevitra fa mety novinidin’ny governemanta ny fahanginan’izy ireo noho ny fandrahonana fa “ raha manohitra anay ianareo dia ataonay ho sahirana ianareo” fampitahorana!
Inona no tena anton’iny fihetsiketsehana iny amin’i Sri Lanka? Rasika Jayakody nanazava:
Nitondra fahatezerana lehibe tamin’ireo “be loha” an’ny governemanta izay renoky ny fahefana sy ny fitiavam-bola iny fihetsiketseham-panoherana hafakely nataon’ny mpiasan’ny orinasa afaka Katunayake iny. Tonga tsara tany amin’ireo mpanao politika tia vola sy tia tena ny hafatra mazava avy amin’ny fihetsiketsehan’i Sri Lanka
Tantaran'ny Azia Atsimo farany
4 andro izayNepal
Manavotra aina ny sarontava, saingy lasa olana goavana ihany koa
1 herinandro izayBangladesh
Rooppur: Rosia kely ao Bangladesh
3 herinandro izayNepal
Ny fahaiza-manenona Dhimal
5 andro izayAmerika Latina
Undertones: Toy ny tosaka rano mangatsiaka ho an'ny mpampahalala vaovao ireo “sarintsarim” -pifidianana ao Nikaragoà
2 herinandro izayAmerika Avaratra
Latino mpifindramonina ao Etazonia: Niova ve ny toe-draharaha?
29 Avrily 2021Meksika
Asongadin'ny Tetikasa Zazavavindrano ny olan'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ao Meksika